PS4 အတွက် China Wireless Controller၊ Built-in 1000mAh အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီ(Golden) ပါရှိသော PS4 Controller အတွက် အစားထိုး စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူများ |Mcldosly
PS4 အတွက် Wireless Controller၊ Built-in 1000mAh အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီ(ရွှေရောင်) ဖြင့် PS4 Controller အတွက် အစားထိုးခြင်း
1.【အဆင့်မြှင့်ထားသော Third Party Brown Controller 】 ၎င်းသည် တရားဝင်ထိန်းချုပ်ကိရိယာမဟုတ်ဘဲ ပြင်ပကုမ္ပဏီ p-s4 အစားထိုးမှုဖြစ်သည်။LITTJOY ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် P-S4/Slim/P-S4 Pro/Android OS/PC(Win7/8/8.1/10) တို့နှင့် ကျယ်ပြန့်စွာ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။သက်တောင့်သက်သာရှိသော ဂိမ်းကစားသည့် နာရီများကို ergonomically ဒီဇိုင်းဆွဲထားသော လက်ကိုင်များ။
2.【အံ့သြဖွယ်နှစ်မြှုပ်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံ 【ဂိမ်းစက်ရှိ ဂိမ်းများအားလုံးအတွက် ကစားသမားများထိန်းချုပ်မှုကို ပေးဆောင်ရန် တိကျသည့်ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို မြှင့်တင်ထားသည်။ကြိုးမဲ့ ထိန်းချုပ်ကိရိယာတွင် ထည့်သွင်းထားသော စပီကာနှင့် နားကြပ်ပေါက်တို့ပါရှိပြီး ပလေယာ၏လက်ထဲတွင် အသံရွေးချယ်ခွင့်အသစ်များစွာကို ထည့်သွင်းထားသည်။3.5mm audio jack သည် ၎င်းတို့၏ဂိမ်းများကို သီးသန့်နားဆင်လိုသော ဂိမ်းကစားသူများအတွက် လက်တွေ့ကျသော ကိုယ်ပိုင်အသံဖြေရှင်းချက်ကို ပေးပါသည်။
3.【နှစ်ချက်တုန်ခါမှုနှင့် ရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်ရေး】PS4 အညိုရောင်အဝေးထိန်းကိရိယာ တပ်ဆင်ထားသည့် မော်တာနှစ်လုံးပါသော မော်တာနှစ်ခုသည် PS4 Joystick Controller နည်းပညာပါရှိသော ရှော့ခ်ဖြစ်ပြီး သင့်စိတ်ကြိုက်ဂိမ်းများတွင် စစ်မှန်သောဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ပါသည်။အလွန်အကဲဆတ်သော လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် သင်၏လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို အာရုံခံနိုင်ပြီး ဂိမ်းအတွင်းရှိ ဇာတ်ကောင်များအပြင် သင် စောင်းခြင်း၊ တွန်းခြင်း၊ လှုပ်ခြင်းကဲ့သို့ ကြိုးမဲ့ PS4 ဂိမ်းကွန်ထရိုးကို လှုပ်လိုက်သည့်အခါတွင် ရွေ့လျားပြီး တုံ့ပြန်မည်ဖြစ်သည်။
4.【Built-in 1000 mAh အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီ 】 ဤ ps-4 ထိန်းချုပ်ကိရိယာတွင် တပ်ဆင်ထားသော 1000 mAh အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီပါရှိသည်။ဂိမ်းအချိန် 8-10 နာရီ ပေးစွမ်းရန်2နာရီသာ အားသွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
5.【အထူးနှင့်အံ့သြဖွယ်လက်ဆောင်】ကြိုးမဲ့ ps4 ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် သူငယ်ချင်း၏မွေးနေ့နှင့် Halloween၊ ကျေးဇူးတော်နေ့၊ ခရစ္စမတ်စသည့် မည်သည့်ပွဲတော်အတွက်မဆို အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်များဖြစ်နိုင်သည်။
1. ခွင့်ပြုပေးသည့်ပုံစံဒီဇိုင်းသည် Third PARTY WIRELESS CONTROLLER- ၎င်းသည်တရားဝင်ထိန်းချုပ်ကိရိယာမဟုတ်သော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အစားထိုးမှုဖြစ်သည်၊ အနက်ရောင်ဟယ်လိုဝင်းစတိုင် ps4 ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် လူကြိုက်များသောဂိမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးနေသည်။Win 7/8/9/10/XP/Vista စသည်တို့ကဲ့သို့သော Windows စနစ်များအားလုံးနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
4. ခလုတ်များနှင့် ဂျွိုင်းစတစ်များအတွက် ပိုကောင်းသော ပစ္စည်းများ သည် သင့်အား အများဆုံး ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက် သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်စေသည်- တင်းကျပ်စွာ စမ်းသပ်ပြီးနောက်၊ ခလုတ်များနှင့် ps4 Joystick များကို အကြိမ်တစ်သန်းအထိ အသုံးပြုနိုင်သည်။ကြိုးမဲ့ ps4 ဂိမ်းကစားသည့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို အချိုးမညီသော ဂျစ်စတစ်များဖြင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး သင့်လက်မတွင် ကြွက်သားများ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ထိရောက်စွာ သက်သာစေနိုင်သည်။
PC:(1) Controller ကို PC USB ကြိုးနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကြိုးတပ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာအဖြစ် အသုံးပြုပါ။
(2) Share ခလုတ်နှင့် PS ခလုတ်မှတစ်ဆင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို Notebook သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။
Layout ကို အဆင့်မြှင့်ပါ။
P4 gamepad controller သည် သင်၏အကောင်းဆုံးဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ခလုတ်များ၏ အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားသော အပြင်အဆင်နှင့် အာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားသော dual analog sticks များသည် အရေးကြီးသောအခိုက်အတန့်များ၏ တိကျမှုကို တိုးတက်စေပြီး တုံ့ပြန်မှုအချိန်ကို လျှော့ချနေစဉ် ဂိမ်းကို ရိုးရှင်းစေသည်။
Trigger ၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်စေရန်၊ သင့်ဂိမ်းတွင် သင်အလိုရှိသောအရာကို ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
SHARE ခလုတ်သည် လက်ငင်း ဂိမ်းဆော့သည့် ဗီဒီယိုနှင့် မျက်နှာပြင် အပ်လုဒ်များဖြင့် လူမှုဆက်ဆံရေးကို လွယ်ကူစေသည်။
ထိလွယ်ရှလွယ်သော Touch Pad
Multi-touch ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် Touch pad သည် ဂိမ်းကစားနိုင်ခြေအသစ်များကို ဖွင့်ပေးသည်၊ ပရီမီယံ ဂိမ်းထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် တကယ့်ကစားသမားများအတွက် မရှိမဖြစ်ပါ။
ဂိမ်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော ရှော့ခ်မော်တာ ၂ ခုကြောင့် တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် တိုက်မိသည့်အခါ ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် သင့်အား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ တုန်ခါမှုတုံ့ပြန်ချက်ပေးနိုင်ပါသည်။
ကစားသူအများအပြားဂိမ်းများ၏ ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားလိုက်ပါ။
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ: ၁။မျှဝေခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်- သင့်ဂိမ်းများကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်နည်းလမ်းဖြင့် ကစားပါ၊ သင်၏ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံး ဗီဒီယိုအပိုင်း၏ အခိုက်အတန့် သို့မဟုတ် တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် စခရင်ရှော့ကို မျှဝေပါ။2။ညစာသုံးနိုင်သည်- PS4/PS4 pro/Slim/Android/PC တွင်အလုပ်လုပ်ပါ၊ ဤဂိမ်းထိန်းချုပ်ကိရိယာဖြင့် သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကို ကစားပါ။3။တိကျမှုထိန်းချုပ်မှု- ပိုမိုကောင်းမွန်သော အန်နာလော့ချောင်းများနှင့် အစပျိုးခလုတ်များ၊ ရွေ့လျားမှုတိုင်းကို ထိန်းချုပ်ထားပါ။4။ကြာရှည်စွာကစားခြင်း- အားအပြည့်သွင်းပြီးနောက် 800mAh ဘက်ထရီဖြင့် 10 နာရီအထိ အဆက်မပြတ်ကစားပါ။5။ရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာ- 6-axis အာရုံခံစနစ်ဖြင့် ဂိမ်းများကို ပံ့ပိုးပါ၊ ပိုမိုပျော်စရာကောင်းသော ဂိမ်းကစားခြင်းကို ခံစားပါ။6။Audio Jack- တပ်ဆင်ပြီး 3.5mm စတီရီယိုအပေါက်၊ သင့်ဂိမ်းများကို အတိုင်းအတာအသစ်တစ်ခုဖြင့် ခံစားလိုက်ပါ။တိုးချဲ့ပေါက်အား ကျွန်ုပ်တို့၏ ps4 ထိန်းချုပ်ကိရိယာအားသွင်းကိရိယာဖြင့် အားသွင်းနိုင်သည်။
မှတ်ချက်- ၁။လက်ကိုင်သည် မူမမှန်သောအခါ၊ controller နောက်ကွယ်ရှိ reset key ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ကြိုးမဲ့ ps4 ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် SONY.3 မှ မူရင်းထုတ်ကုန်မဟုတ်သည့် ပြင်ပကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။အားအပြည့်သွင်းနေစဉ် ဂိမ်းကိုဆော့ပါ။အထုပ်
အကြောင်းအရာများ- 1 xPS4 ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ 1 x USB ကြိုး၊ 1 x အသုံးပြုသူလက်စွဲ
ယခင်- PS4 အတွက် DOSLY Gamepad Controller၊ ကြိုးမဲ့ PS4 Controller အတွက် PS4/Slim/Pro (အနက်ရောင်)
နောက်တစ်ခု: DOSLY Wireless Controller သည် PS 4/Pro Console/Slim/PC/Android/IOS 13 နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော Dual Vibration၊ Touch Pad၊ Bluetooth၊ Stereo Headset Jack၊ Six Axis Motion Control၊ Rechargeable Orange
PS-4 ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ကိရိယာ PS-4/P နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်...
PS4 ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ အားပြန်သွင်းနိုင်သော G ကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန်
PS4 အတွက် ကြိုးမဲ့ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ PS အတွက် အစားထိုး...